कोहलपुरमा कर्फ्यू आदेश जारी – Merodesh.news
कोहलपुर, २२ मंसिर । त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय कोहलपुरमा अध्ययनरत सात वर्षीया बालिकालाई ट्रकले ठक्कर दिएपछि कोहलपुर तनावग्रस्त बनेको छ । ट्रकको ठक्करबाट स्कुले छात्रा घाइते भएपछि बढेको तनावलाई मत्थर गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले कोहलपुरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकान्त उपाध्यायकका अनुसार केहीबेरअघि सकिएको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कोहलपुरमा दिउँसो तीन बजेदेखि कर्फ्यू लगाउने निर्णय गरेको हो । उपाध्यायका अनुसार ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएकी छात्रालाई उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइएको छ ।
भएको के थियो त कोहलपुरमा ?
वाईडबडी प्रकरणबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन मान्य छैन : कँडेल
काठमाडौ, पुस २० ‘इनोभेटर’ ई. दिपेन्द्र कँडेले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन गलत र अपुरो भएको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब[...]